Ujyaalo Times | बिग मार्टको ‘बिग मेला’ मा पाँच तोला सुन जित्ने अवसर
प्रवाधि शिक्षा स्वास्थ्य
काठमाडौं। बिग मार्टले आफ्नो ५०औं स्टोर सुरु गरेको अवसरमा ‘बिग मेला’ नामको ग्राहक योजना सार्वजनिक गरेको छ । माघ १८ गतेबाट सुरु भएको ‘बिग मेला’ योजना अवधिमा बिग मार्टको जुनसुकै स्टोरबाट सामान खरिद गर्ने एक जना भाग्यशाली ग्राहकले पाँच तोला सुन […]
सुदूरपश्चिमका ७ पहाडी जिल्लामा तेस्रो पटक भारी हिमपात
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७ पहाडी जिल्लामा तेस्रो पटक भारी हिमपात भएपछि जनजिवन कष्टर बनेको छ । हिमपातले पहाडी सात जिल्ला बैतडी, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बाजुरा, दर्चुला, बझाङको सडक अवरुद्ध भएको छ । डडेल्धुराको भिमदत्त राजमार्ग अन्र्तगत डडेल्धुरा सदरमुकाम अमरगढी भालुमारे, अमजमेरु […]
उखु किसानलाई राजपाको ज्याकेट
काठमाडौं । आन्दोलनरत उखु किसानलाई ज्याकेट प्रदान गरिएको छ । क्लोथ बैंक धनुषा र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको केन्द्रीय सदस्य अनिल महासेठको पहलमा आन्दोलनरत उखु किसानलाई ज्याकेट प्रदान गरिएको हो । चिनी मिलले ३ वर्षदेखि भुक्तानी नदिएको भन्दै काठमाडौंको माइतीघरमा […]
मंसिर २८ गते अण्डा उत्पादक संघ र वितरकहरूको अण्डाको मूल्य निर्धारण गरिएको विषयमा पक्राउ परेका पांँच जना किसानलाई हालसम्म रिहाई नगरिएको भन्दै किसानले भरतपुरको व्यस्त सडकमा अण्डा फुटाएर विरोध गरेका छन् । भरतपुरमा संघले बिनाकसुर उनीहरूलाई हिरासतमा राखेर मुद्दा चलाएको […]
नेपाल प्रहरीलाई चीनले दियो मोटरसाइकल
काठमाडौँ । नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावासले प्रहरीलाई २३ वटा मोटरसाइकल दिएको छ । दूतावासले महानगरीय प्रहरी कार्यालय काठमाडौँलाई सहयोग स्वरूप ५६ लाख ३२ हजार ७ सय रूपैया मूल्य बराबरको सो मोटरसाइकल हस्तान्तरण गरेको हो । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी […]
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा साढे १८ करोड रुपैयाँको चुइङ्गम चपाइएको छ। विभिन्न मुलुकबाट साउनदेखि कात्तिकसम्मको ४ महिनाको अवधिमा ६ लाख २१ हजार ६ सय ८ किलो चुइङ्गम नेपाल भित्रिएको हो। यो चुइङ्गमको मूल्य १८ करोड ४८ लाख ५५ हजार […]
दिल्लीमा खुल्यो आइएमई फोरेक्स !
नयाँदिल्ली । प्रवासी नेपाली दाजु–भाई तथा दिदी–बहिनीहरुलाई लक्षित गरेर आइएमईले भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा मुद्रा सटही तथा रेमिट्न्स कारोबार सुरु गरेको छ । सेवा सहजताका लागि आइएमईले यस्तो सुबिधा थप गरेको आइएमईले जानकारी दिएको छ । साथै नेपाली रुपैयाबाट भारतीय रुपैया […]
यस्तो छ आजको मुन्द्रा विनिमयदर, कुन देशको कति छ ?
काठमाडौं । आज (आइतबार) अमेरिकी डलरको भाउ घटेको छ। आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११३ रुपैयाँ ९५ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ११४ रुपैयाँ ५५ पैसा रहेको छ। त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १३८ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रिदर […]
आइ एम ई नेपालकै उत्कृष्ट रेमिट्यान्स कम्पनी हो !
भारत । आइ एम ई रेमिट्यान्स कम्पनी नेपालकै राम्रो, भरपर्दो, सजिलो र उत्कृष्ट कम्पनी भएको आइ एम ई नेपालका भारत सम्पर्क प्रमुख ध्रुबराज ढकालले बताएका छन् । संसारको कुनै पनि कुनाबाट पैसा पठाउदा नेपालमा रहेका दश हजार भन्दा बढि बैंक […]
स्मार्ट कृषि गाउँ ः न पानी , न बत्ती
दाङ । प्रदेश न ५ को सरकारले बंगलाचुली गाउँपालिका ६ को रिभान गाउँलाई स्माट कृषि गाउँ घोषणा गरेपनि पानी र विद्युत विस्तार हुन नसक्दा ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अघि बढन सकेको छैन । पानी र विद्युतको अभावमा कार्यक्रम […]
©2019 ujyaalotimes.com, All Rights Reserved.